भारतीय वायुसेनाको लडाकु बिमान काश्मिरमा दुर्घटना – PathivaraOnline
Home > समाचार > भारतीय वायुसेनाको लडाकु बिमान काश्मिरमा दुर्घटना
काठमाडाैं । भारतीय वायुसेनाको एउटा लडाकु बिमान मिग २१ काश्मिरमा दुर्घटना भएको छ । काश्मिरको कलान गाउँमा विमान खसेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।दुर्घटनामा बिमानका पाइलटको मृत्यु भएको छ । अर्का पाइलटको पनि मृत्यु भएको आशंका गरिएको छ । मिग २१ ले श्रीनगर बिमानस्थलबाट उडान भरेको थियो । उडान लगत्तै ठूलो आवाजसहित बिमान पड्कियो र खेतमा खस्यो । दुर्घटनाग्रस्त विमान पूर्णरुपमा ध्व्स्त भएको छ । अहिले श्रीनगर बिमानस्थलबाट उडान र अवतरण बन्द गरिएको छ ।
भारतीय वायू सेनाको एक लडाकु बिमानले पाकिस्तानी क्षेत्रमा पसेर बम विष्फोट गराएको भोलिपल्ट यो घटना भएको हो । पछिल्ला २० दिनमा भारतमा ५ वटा बिमान दुर्घटना भएका छन् काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो समय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारमा यात्रुको समान जाँचमा निकै कडाइ गरेको छ । तोकिएको भन्दा बढी परिमाणमा समान ल्याए जफत गरेर राखिदिने काम भइरहेको छ । विमानस्थल भन्सारका हाकिम यो क्रम अझै जारी रहेको बताउँछन् ।
राजस्वको लक्ष्य भेट्न मुस्किल भएपछि सरकारले विमानस्थलमा आउने यात्रुलाई तोकिएको भन्दा बढी समान ल्याउन दिन निषेध गरेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।तर, विदेशबाट आउने नेपाली यात्रुहरुले सरकारको यो कदमलाई चित्त बुझाएका छैनन् । विशेष गरी विदेशमा काम गरेर फर्किएका नेपालीले दुःख गरेर घरपरिवारका लागि केही ल्याउन खोज्दा सरकारले छापामार शैलीमा ‘लूट’ मच्चाएको उनीहरुको गुनासो छ ।यसअघि खुकुलो रहेको भन्सार जाँचमा कडाइ भएपछि अहिले धेरै यात्रुले विमानस्थलमा सास्ती भोगेका छन् । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुरसँग केही प्रश्नहरु सोध्यौं राजस्व बढाउनकै लागि भनेर जनवरी १ देखि विमानस्थल भन्सारमा विदेशबाट फर्किने यात्रुले ल्याउने झिटीगुन्टाका सामानमा कडा चेकजाँच सुरु भयो । यसको परिणाम के कस्तो देखिँदैछ ?
पहिले तोकिएभन्दा बढी धेरै मात्रामा समान आउँथे । अहिले त्यो विस्तारै कम हुँदै गएको छ । यात्रु सचेत भएका छन्, उहाँहरुले सहयोग गर्नुभएको छ पहिलो दिनमै सयौं बढी रक्सीका बोतल आउँथे । हामीले कडाइ गरेपछि अहिले दैनिक कहिले ५-७ बोतल त कहिले १०-१२ बोतल मात्रै जफत हुन्छ । विस्तारै तोकिएभन्दा बढी सामान ल्याउने क्रम घट्दै गएको छ । केहीले थाहा नपाएर ल्याउनुभएको हुन्छ भने कतिले थाहा पाई-पाई पनि ल्याउनुहुन्छ जे होस् कानुनले तोकेको परिणामभन्दा बढी ल्याउनेबाट हामीले जफत गर्ने क्रम जारी छ । तर, अब पहिलो जस्तो छैन, सामान्य अवस्थामा आइसक्यो झिटीगुन्टा आदेशमा तपाईंहरुले अहिले आएर कडाइ गर्नुभयो । तर, यसबारे पर्याप्त जानकारी दिने गरी काम गर्नुभएन । हजारौं रकम तिरेर ल्याएको समान एकैपटक विमानस्थलमा जफत हुँदा यात्रुले निकै असन्तुष्टि जनाएका छन् नि ?
सबैले कानुन जान्नुपर्छ । यसबारे हाम्रै वेबसाइटमा पनि पर्याप्त जानकारी राखेका छौं । त्रिभुवन विमानस्थलको वेबसाइटमा पनि यसबारे जानकारी दिएका छौं । यस्तै विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि झिटीगुन्टा आदेशबारे पर्याप्त समाचार सम्प्रेषण भएका छन् ।त्यतिले मात्रै पुग्दैन भनेर नेपाल आउने विदेशी एयरलाइन्सहरुलाई पनि औपचारिकरुपमै नेपालको भन्सारका नियमहरुबारे जानकारी दिएका छौं । कतार, थाइल्यान्ड, मलेसिया, हङकङ, दुबई सबैतिरबाट आउने वायुसेवालाई भन्सारमा गरिएको कडाइबारे जानकारी दिएर आफ्नो यात्रुलाई सेचत गर्न भनेका छौं ।यस्तै, हामीले चीन र भारतको दूतावासमै पत्र लेखेर यसबारे जानकारी दिएका छौं । हामीले प्रयास कम गरेका हैनौं । धेरैलाई यो कुरा थाहा पनि हुँदै गएको छ । त्यसैले अवैधरुपमा आउने झिटीगुन्टा निकै कम पनि भएको छ ।पहिले पनि समय-समयमा यस्तो कडाइ हुन्थ्यो, पछि चेकजाँच फितलो हुन्थ्यो । यसपटक पनि यो हो-हल्ला कुनै अवधिसम्मका लागि मात्रै हो कि पहिले-पहिले त्यस्तो भयो । अब त्यस्तो हुँदैन । ऐनमा जे-जे लेखिएका छन्, अक्षरसः पालना हुन्छ । यसका लागि यो प्रयास निरन्तर जारी हुन्छ ।
पहिले लेखिएका कुरा पनि कार्यान्वयन नगर्दा अहिले समस्या भएको जस्तो देखियो । तर, अब भविष्यमा पनि हामी यस्तो कडाइलाई निरन्तरता दिन्छौं । नियम कानुन मिच्ने छुट कसैलाई कहिल्यै हुँदैन । हामी विमानस्थलमा लगातार यो निगरानी जारी राख्छौं । विदेशबाट जति पनि सामान ल्याउनुस् भन्न सकिँदैन ।धेरैथरिका सामानहरु जफत हुँदैनन् । तर, बढी गुनासो रक्सीको जफतका विषयमा आउने रहेछ । किन होला ?हाम्रो देशमा प्रिमियम रक्सीमा अन्तःशुल्क र अन्य कर धेरै हुँदा धेरै महंगो पर्छ । त्यही रक्सी विदेशमा ड्युटी फ्रीमा किन्दा सस्तो पर्छ ।विदेशमा दुईवटा रक्सी किन्दा एउटा सित्तैमा दिनेदेखि आकर्षक प्याकेजिङ गरिदिनेसम्मका अफर हुन्छन् । यस्तोमा नेपालीहरु लोभिन्छन् र देशको कानुनको ख्याल नगरी किनेर ल्याउँछन् ।नियम मिचेर धेरै परिमाणमा रक्सी नै आउँछ । यसले समस्या ल्याएको हो । तर, यहाँ अहिले झिटीगुन्टा आदेश निकै कडाइका साथ लागू भएको भएको छ । विस्तारै यस्तो क्रम घट्दै गएकाले अब स्थिति सामान्यमा पुग्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
तपाईंहरु झिटीगुन्टा आदेशको रटान लगाइरहनुभएको छ । भन्सार जाँचमा त व्यवहारिकता हेरेर पनि यसमा लचकता अपनाउनुपर्ने होइ न र ? अझ यसमाथि झिटीगुन्टा आदेश नै अव्यवहारिक छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि ?सरकारले आर्थिक ऐन अन्तरगत रहेर झिटीगुन्टा आदेश जारी गर्छ । हामीले यसको पालना गराउने हो, मैले भन्सारको प्रमुखका रुपमा त्यही कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ मलाई लाग्दैन कि झिटीगुन्टा आदेशले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई अन्याय गरेको छ । किनभने अहिले पनि दिनमा २-३ सय टेलिभिजन सेट विनाभन्सार विमानस्थलबाट आउँदैछन् । एकजनाले ल्याउँदा एउटा मात्रै त हो नि भन्ने जस्तो लाग्ला, तर सयौंले ल्याउँदा त्यसको मात्रा थोरै हुँदैन । सरकारले राजस्व मात्रै हेरेको भए यस्तो छुट पनि दिँदैन थियो होला नि !
झिटीगुन्टामा अरु के-के सामान ल्याउन पाइन्छ ?
धेरै समान झिटीगुन्टामर्फत ल्याउन पाइन्छ । १५ जोरसम्म लुगाकपडा, एक थान नयाँ मोबाइल सेट, सुनका गहना लगायत धेरै ल्याउन दिइएको छ । कतिपय व्यवसायिक पेशामा व्यक्तिले खेलकुदका लगायत विभिन्न समाग्री पनि ल्याइरहेका छन् ।तर, तपाईंले त्यसो भनिरहँदा हिजोमात्रै विमानस्थल भन्सारले निकालेको सूचनामा त क्रिकेट ब्यागसमेत लिलामीमा राखेको देखियो नि ?सबैले स्पष्ट भए हुन्छ, हामीले कानुनभन्दा विपरीत हुने गरी ल्याएका कुनै पनि सामाग्री छोड्दैनौं । तर, लिलामीमा राखिएका क्रिकेट ब्याग भने हामीले विमानस्थलमा जफत गरेका होइनौं । ती भारतबाट आएका क्रिकेट ब्याग हुन् ।प्रहरीले विमानस्थल बाहिरबाटै जफत गरेर हामीलाई बुझाएको थियो । त्यसलाई पनि लिलामीमा राखेका हौं । हामीले कानुनले गर्नु हुँदैन भन्छ त्यही हेर्ने हो । जे गर्नुपर्छ भन्छ त्यही गर्ने हो ।